ကုန်းနေရေနေ သတ္တဝါ - ဝီကီပီးဒီးယား
Amphibian ဆိုသည်မှာ မြန်မာလို ကုန်းတစ်ပိုင်းရေတစ်ပိုင်း သို့ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ သတ္တဝါလောကတွင် ကုန်းနေသတ္တဝါများသည် ရေနေသတ္တဝါများထက်ပိုပြီး အဆင့်မြင့်ကြသည်။ ဤကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ၏ အဆင့်မှာ ကုန်းသတ္တဝါနှင့် ရေသတ္တဝါများ၏ ကြားထဲတွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့မှာ အဆင့်မြင့် ကုန်းနေသတ္တဝါများကဲ့သို့ ကုန်းပေါ်တွင် နေထိုင်နိုင်ကြသော်လည်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ မနေနိုင်ကြ။ ရေထဲသို့ တစ်ခါတစ်ရံ ပြန်ဆင်းကြရသည်။ ကုန်းနေရေနေ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော သတ္တဝါများမှာ- ဖား၊ မိကျောင်း၊ လိပ်၊ ရေပုတ်သင်နှင့် အခြားအကောင်များပါဝင်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁  Amphibians." Gale Encyclopedia of Science. Thomson Gale, 2001. NA. Academic OneFile. Gale. Oakland Community College.9Aug. 2008 [<http://find.galegroup.com/itx/start.do?prodId=AONE>.]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကုန်းနေရေနေ_သတ္တဝါ&oldid=714696" မှ ရယူရန်